Faras faransiis ama faras kooli | Fardaha Noti
Fardaha Faras faransiis ama faras koorsadaWaa nooc asal ahaan ka soo jeeda Faransiiska waana kan saxda ah ee xulka qaranku u adeegsado tartankooda. Sidaa darteed waxaan ka hadleynaa nooc sumcad ku leh waddanka Gallic. Xirfadiisa waxaa lagu arki karaa Hippodrome de Vincennes, France, oo ah wadada ugu weyn ee lagu soo bandhigo tartamada.
Trotter-kii Faransiiska wuxuu ka yimid Normandy qiyaastii qarnigii XNUMXaad iyo faraciisu waxay ka yimaadeen Ingriiska Thoroughbred iyo Norkfolk Trotter, oo caan ku ahaa xawaare iyo qallafsanaanta ku tumashada.
Tartanadan ka dib waxay la gudbeen mareegaha Norman taas oo keentay, marka hore, faraska koorsada iyo markii dambe faransiiska farantiiska oo ay weheliyaan Anglo-Norman, guud ahaan ahaanshaha faras qabyo ah. Iskutallaabyo kala duwan ayaa sidoo kale lagu sameeyay faraska Anglo-Arab si hufan si loo soo saaro nooc iska caabin ah, deg deg ah oo dhakhso leh.
Bilowgii qarnigii 1940aad waxaa loo diiwaangeliyey inay tahay nooc rasmi ah waxaana loo oggolaaday diiwaangelinta fardaha, laakiin waxay ahayd XNUMX markii laga joojiyay dhammaan kuwa aan waalidkood diiwaangelin. Sanadkii 1836 tababarkii ugu horreeyay ee cayaartan waxaa laga dhisay Chesburg. Cawaaqibka xamaasadda rabitaanku wuxuu ahaa tartankii Faransiiska ee Trotter.
Trotter-ka Faransiiska waa faras gaar ahaan oo lagu gartaa boodboodnimada iyo kartidiisa. Dhammaan laamaha fardahaas waxoogaa way ku kala duwan yihiin noocyadooda, in kasta oo caammadoodu aad u eg tahay. Waxay leedahay madax la mid ah kan loo yaqaan 'Thoroughbred', in kasta oo uu ka soo jeedo faraska Anglo-Norman.
Waxay leeyihiin jidh ballaadhan oo isbeddelay, leh dhabarka iyo garbaha oo xoog leh oo murqaha hoos ugu soo dhacaya gadaal u mahadsanid horumarka soo maray, addimada waa dherer iyo xoog badan yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faras faransiis ama faras koorsada
Xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan fardaha
Tababbarka fuulista iyo diyaarinta jirka